Amazon ကဂိမ်းနှင့် 4K TV က streaming Fire ကို update ကိုလွှတ်တင် - သတင်း Rule
Amazon ကဂိမ်းနှင့် 4K TV က streaming Fire ကို update ကိုလွှတ်တင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Amazon ကဂိမ်းနှင့် 4K TV က streaming Fire ကို update ကိုလွှတ်တင်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 17 စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 13.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Amazon က၎င်း၏ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်အသစ်တစ်ခု Fire ကို TV က box နဲ့ ultra-high ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းအရာနှင့် 4K content ထဲကိုရွေ့လျားနေသည်.
အဆိုပါအသစ် Fire က TV မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်မီဒီယာစီးဆင်းမှု box ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်တည်ဆောက်, အရာ Amazon ကတောင်းဆိုမှုများကိုဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီအတွက်စျေးကွက်အပေါ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး box ကိုခဲ့ပြီ, အခြားသူများအကြားက Apple TV ကရိုက်နှက်.
အမေဇုံ၏မျက်နှာကိုအတွက်အီရန်ဖြစ်ပါသည် Apple ရဲ့ new box ကို, အသစ်အ Fire က TV မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုကာ 75% မြန်မြန်, 4K content တွေကိုကိုင်တွယ်, နှစ်ကြိမ်၎င်း၏ဖောက်သည်အများအပြားအဖြစ်အဘယ်သူသည်လောလောဆယ်တွင်တတ်နိုင်သမျှအရေအတွက်ကထက်ပိုမိုဆင်းရဲသောသူသည်ဘရော့ဒ်ဘန်း connections ကိုကျော် 1080p ဗီဒီယို stream ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝနဲ့ HD content များအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်တဲ့ compression system ကိုရှိပါတယ်.
အမေဇုံ၏မူလတီဗီစီးရီးအားလုံးသည် 4K အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, အလိုတော်အမေရိကန် TV ကထိုကဲ့သို့သော Breaking Bad နှင့်မကြာသေးမီကရုပ်ရှင်များရာပေါင်းများစွာအဖြစ်ပြသထားတယ်အဖြစ်. ပြိုင်ဘက်ဝန်ဆောင်မှု Netflix နဲ့, အရာကိုလည်း 4K content တွေကိုစာကြည့်တိုက်ရှိတယ်, အသစ်အ Fire ကို TV ပေါ်မှာက ultra HD မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. အနည်းဆုံးလူ 15Mbps ၏ connection အမြန်နှုန်း 4K content များအတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်.
Streaming မီဒီယာကလည်းအမေဇုံ "ASAP" လို့ခေါ်ဆိုပြီးအသုံးပြုလိမ့်မည်, အရာအသုံးပြုသူများကိုမြင်ချင်နိုင်ဖွယ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခန့်မှန်းထားသည်နှင့်အစားအိပ်ရေးဝြခင်​​းဖို့တာထက်ချက်ချင်းစတင်သည်ဒါကြောင့် background မှာ device ပေါ်မှာပြပွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်တစ်ဦးသောအဘို့ကို caches. မီး TV အစီအစဉ်ကိုလည်းထပ်မံသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ microSD cards တွေအသုံးပြုသို့မဟုတ်ဒေသခံမီဒီယာဖွင့်နိုင်ဘို့လို့ရပါတယ်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နားကြပ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်စကားသံကိုရှာဖွေရေးထောက်ခံမှုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုဂိမ်းများ Controller ကိုဖြန့်ချိ, မည်သည့်မီဒီယာက streaming ဝန်ဆောင်မှု၏အကြီးဆုံးဂိမ်းများစာကြည့်တိုက်ရှိသည်ဖို့ဟုဆိုကာ, ကျော်နှင့်အတူ 3,000 apps များ, ၎င်း၏အမေဇုံ app store ကိုမှတဆင့်ရရှိနိုင်ဂိမ်းများနှင့်ချန်နယ်.
Amazon ရဲ့ကြေငြာချက်၏နိုးထလာ Apple ရဲ့ TV နဲ့ Apple ၏ reinvigoration, အရာတွေဖြစ်တဲ့စကားသံကိုရှာဖွေရေးအဖြစ် features အသစ်တွေရှိပါတယ်, နှင့်ဧည့်ခန်းသို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ App Store ကိုဆောင်ခဲ့.
Fire ကို TV က, အမေရိကန်နှင့်ဥရောပတိုက်တွင်တစ်နှစ်ရောင်းရငွေအပေါ်ခဲ့ပြီဟူသော, ရှိပြီးသားအကြံပြုချက်များကိုဖူး, ရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗီရှိုးများအတွက်စကားသံကိုရှာဖွေရေးနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ X-Ray သတင်းအချက်အလက်စနစ်, အဖြစ်ဂိမ်းများနှင့် apps များ.
အဆိုပါထုတ်လွှင် box ကိုလည်းဆုံးမသွန်သင်ဗီဒီယိုနှင့်ချောကိုခေါ် Amazon ရဲ့ built-in Live-လူတစ်နည်းပညာကိုထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, အရာဖုန်းကိုကနေတဆင့် features တွေနဲ့ settings တွေကိုမှတဆင့်အသုံးပြုသူများသည်ကိုလမျးညှနျနဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနိုင်ပါ.
အဆိုပါအသစ် Fire က TV မှာ£ 79,99 ကုန်ကျမည်, Pre-အမိန့်သည်ယနေ့စတင်ပြီးမှတင်ပို့နှင့်အတူ5အောက်တိုဘာလ. ဒါကြောင့်ယခင် Fire က TV မှာကဲ့သို့လူကြိုက်များမည်လော, Apple နှင့် jack ကို-of အားလုံးအရောင်းအ Roku ကကနေဈေးကွက်ထဲမှာပေးထားတဲ့ သာ. ကြီးယှဉ်ပြိုင်မှု, မြင်စေဖြစ်နေဆဲ.
Amazon ကလည်းတစ်ဦး updated Fire က TV မှာချောင်းကိုနှင့်သစ်များစွာ Fire က tablet များဖြန့်ချိ.
• Apple TV ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဧည့်ခန်းသို့ App Store ကိုဆောင်တတ်၏
• အကောင်းဆုံးကိုမီဒီယာစီးဆင်းမှု box ကိုဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
• Amazon က UK မှာ Fire ကို TV ကထုတ်လွှင် box ရဲ့ Stick ဗားရှင်းဖြန့်ချိ
23739	0 အမေဇုံချုပ်လက်ငင်းဗီဒီယို, Amazon.com, အပိုဒ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အင်တာနက်ကို, မီဒီယာ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ
← လူသားသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter အတွက်မိုဃ်းတိမ်မှကြာ Apple က iPhone ကို 6S နှင့် 6S Plus အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Roundup →